SAWIRO:-Madaxweynaha KG oo farriin u direy Ciidamo loo diyaariyey Sh/Hoose - Radio Risaala: Somali News Online
Home Wararka SAWIRO:-Madaxweynaha KG oo farriin u direy Ciidamo loo diyaariyey Sh/Hoose
SAWIRO:-Madaxweynaha KG oo farriin u direy Ciidamo loo diyaariyey Sh/Hoose
Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta-gareen oo ku sugan Magaalada Muqdisho ayaa Maanta waxaa uu booqday Ciidamo Maamulkaas loogu tababarey Magalada Muqdisho.
Ciidamadaan oo tiro ahaa gaaraya 400 oo Askari ayaa ah kuwa ka tirsan Booliska Koonfur Galbeed,kuwaas oo lagu tababarey Xerada Tababarka ciidamada ee Janeraal Kaahiye ee Magaalada muqdisho,iyaga oo ka howlgeli doona Gobolka Shabeellaha Hoose.
Kormeerka ayaa waxaa Madaxweyne laftagareen ku wehlinayey taliyaha Ciidamada Booliska Soomaaliyeed Xasan Maxamed Xijaar,waxaana uu kula dardaarmey Ciidamada inay waajibaadkooda u gutaan sidii loogu talo galaye.
Waxaa uu sheegay in Ciidamadaan ay ka howlgeli doonaan Gobolka Shabeellaha Hoose gaaran ahaan deegaannada dhawaan laga saarey xubnaha ka tirsan Ururka Al-Shabaab,isaga oo sheegay in qalabkooda loo dhameystiri doono.
29-kii Bishii December ee sanadkii tegay ee 2019 ayaa waxaa ciidamadaan tababarvmuddo u socdey loogu soo xirey xerada tababarka Janeraal Kaahiye ee Magaalada Muqdisho,kuwaas oo dhawaan la geyn doono Gobolka Shabeellaha Hoose.
Previous articleMashquulkii ugu badnaa oo ka jira Magaalada Dhuusamareeb
Next articleCiidamada Dowladda oo dagaal kula wareegay deegaan ka tirsan Jubabda Hoose
Amnesty International oo dalbatay in si shuruud la’aan ah lagu sii daayo Wariye Abuja
Wasiir Goodax oo faahfaahiyay sidda uu dhacayo Imtixaanka Shihaadiga ah
Taiwan oo wakiil u soo Magacowday Somaliland
Saraakiil gaartay Guriceel & Wafdi ku wajahan
Dhageyso:-Muxuu Guddoomiye Mursal ka yiri Maqaamka G/Banaadir?
DHAGEYSO: Warka Duhur ee Radio Risaala 03-07-2020
DHAGEYSO: Warka Habeen 2-7-2020
Amnesty International is concerned about the continued detention of journalist Mohamed Abdiwahab Nur (Abuja) and the organization is calling on Somalia authorities to immediately...